ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း Archives - Page 20 of 192 - Myanmar Fire Services Department
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကျောင်းကြီးလမ်းတွင် သစ်ပင်ကိုင်းကျိုးကျမှုသတင်း
editor | Oct 18, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၁၇.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၆၄၅ အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ ကျောင်းကြီးလမ်း၊ မြို့နယ်ကြက်ခြေနီရုံးအနီး၊ လမ်းဘေးတွင် ပေါက်နေသော လုံးပတ်(၅)ပေ၊ အမြင့်(၃၀)ပေခန့်ရှိ ခရေပင် မှ လုံးပတ်(၁)ပေခွဲ၊ အရှည်(၂၀)ပေခန့်ရှိ ခရေပင်ကိုင်းသည်...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်မြို့နယ်၊ ထုံးတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ခွဲကျင်းလမ်းတွင် သုံးဘီးဆိုင်ကယ် ချောက်ထဲသို့ � ....
၁၇.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၉၅၇ အချိန်ခန့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ သရက်ခရိုင်၊ သရက်မြို့နယ်၊ ထုံးတောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိလပ်မြေစက်ရုံအနီး၊ ကျောက်ခွဲကျင်းလမ်းတွင် ယာဉ်မောင်း အောင်မျိုးမင်း မောင်းနှင်လာသော (နံပါတ်မပါ) LIFAN အမျိုးအစား သုံးဘီးဆိုင်ကယ် (အဖြူရောင်)ယာဉ်သည်...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၈၄/၁)နှင့် (၁၈၄/၂)ကြားတွင် ယ� ....
editor | Oct 16, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၁၅.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၂ ၃၀ အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၈၄/၁)နှင့် (၁၈၄/၂)ကြားတွင် ယာဉ်မောင်း ဦးလင်းသန်း မောင်းနှင်လာသော NISSAN အမျိုးအစား(၆)ဘီး (အဖြူရောင်)ကုန်တင်ယာဉ်သည် မောင်းနှင်လာစဉ်...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးမြို့၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ဆန်တန်းရပ်၊ နေအိမ်တွင် သစ်ပင်လဲကျမှုသတင်း
editor | Oct 14, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၁၃.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၉ ၂၀ အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦးမြို့၊ အမှတ် (၂) ရပ်ကွက်၊ ဆန်တန်းရပ်၊ နေအိမ်တွင် လုံးပတ် (၁၅) ပေပတ်လည်ခန့် အမြင့်ပေ ၁၀၀ ခန့်ရှိ ကုက္ကိုပင်သည် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မြေသားခိုင်မာမှုမရှိဘဲ အမြစ်မှ လဲကျကာ (၃၀x၃၀) ပေ ပတ်လည်...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်- ရန်ကုန်အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၂၄/၆)နှင့်(၁၂၄/၇)ကြားတ� ....
editor | Oct 13, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
၁၂.၁၀.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၆ ၀၀အချိန်ခန့်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်- ရန်ကုန်အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ် (၁၂၄/၆)နှင့်(၁၂၄/၇)ကြားတွင် ယာဉ်မောင်း ဦးဇော်မင်းနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်(၁)ဦးတို့ မောင်းနှင်လာသော Hino Ranger အမျိုးအစား (ခဲ/ဖြူရောင်)ယာဉ်သည်...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောက်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁၄) နယ်မြေ၊ ကမ်းနားလမ်းတွင် သစ်ပင်လဲကျမှုသတင်း
editor | Oct 12, 2020 | News, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
Oct 11, about 09 30,abig banyan tree which has 14 ft in height and 15 ft in girth fell down onto the road and blocked the traffic. It was happened at the No 14 ward, Chauk township, Magway region. As soon as the report was received, 8 fire personnel and 10 auxiliary...
Page 20 of 192« « Previous...10...1819202122...304050...Next »